Ihhotela elahlwayo nemikhiqizo yezimonyo Abakhiqizi nabahlinzeki - China Ihhotela Elilahlwayo Nemikhiqizo Yezimonyo Imikhiqizo Yomshini
Kungumshini othomathikhi okhethekile wokukhiqiza isikhwama somcamelo ongasuki wesikhathi esisodwa, futhi okukhiphayo kungu-30pcs / min. Kusetshenziswa ezindizeni, esibhedlela, ehhotela, futhi kungokuphakelayo kwezinto ezibonakalayo ngokuzenzekelayo, asikho isidingo sokusebenza.
Intengo: USD60000 / SET
Non Nokwelukiweyo Headrest Cover Ukwenza Machine
Kuyimishini ekhethekile ukukhiqiza ngokuzenzakalela ikhava yesikhwama se-head-non-woven yesikhathi esisodwa .Isebenza endizeni, esitimeleni, ebhasini. Kwenzeka ngokuzenzakalela ukondla impahla kumikhiqizo eqediwe.
Okuzenzakalelayo alahlwayo Glove & Foot imaski Ukwenza Machine
Isakhiwo esenziwe ngamakhompiyutha senza uphawu luphelele ngokwengeziwe. Yamukela okulungisekayo kwe-nitrogen equirement futhi ifake umshini wokuthayipha ukushisa, futhi isikhundla sokuphrinta singakhululwa ngokukhululekile. Ukubukeka kungenziwa ngensimbi engagqwali noma ukufafaza ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Intengo: USD30000 / SET
Okuzenzakalelayo Ukotini Puff / Glove Ukwenza Machine
Lo mshini usetshenziselwa ukukhukhumeza ukotini negilavu. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izitayela nosayizi abahlukahlukene badinga kuphela ukushintsha usayizi wesikhunta.
Intengo: USD20000 / SET
Okuzenzakalelayo Isandla Plug-in Ukotini Puff Ukwenza Machine
Kungumshini ozenzakalelayo. Ukusuka kokuqukethwe okuluhlaza kusebenza kumikhiqizo eqediwe yokusika nokukhipha ngasikhathi sinye. Ingakhiqiza ukotini wokwakheka ongalukanga, imaski yobuso, ama-insoles, indwangu ye-mop, futhi futhi ingenza amagilavu ​​wokuhlanza angalukanga, isikhunta kuphela okufanele siguqulwe.
Alahlwayo Shoe Cover Ukwenza Machine
Kungumshini okhethekile wokukhiqiza ngokuzenzakalela ikhava yezicathulo ezinwebeka, ezingalukiwe nezipulasitiki. Akunasidingo sokusebenza ekukhiqizeni. Imikhiqizo isetshenziswa esibhedlela, embonini yokugqwala kwamahhala. Kwenzeka ngokuzenzakalela ukondla impahla kumikhiqizo eqediwe.
Intengo: USD18000 / SET
Alahlwayo Bouffant Cap Ukwenza Machine
Kuyimishini ekhethekile ukukhiqiza ngokuzenzakalela ikepisi lohlobo olungolukiwe ngokukhipha okungama-60-80pcs / min.Lisetshenziswa eHotel, Emndenini, Esibhedlela nasezimbonini ezingenaluthuli .Lizondla ngokuzenzakalela ngezinto eziphelile.
Alahlwayo Amafutha Control Film Ukwenza Machine
Lo mshini usetshenziselwa ukwenza ifilimu yokulawula uwoyela elahlwayo noma iphepha elimunca uwoyela ngobuhle. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izitayela nosayizi abahlukahlukene badinga kuphela ukushintsha usayizi wesikhunta.
Intengo: USD21000 / SET